မွေးဖွားခြင်းနှင့် သေဆုံးခြင်းဆိုင်ရာ မိုဘိုင်း မှတ်ပုံတင်ခြင်း စီမံချက်
တာဝန်သိ စီးပွားရေး နှင့် ထောက်ပံ့ရေး
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်တင်ပြခွင့်
ဘေးကင်းရေး နှင့် လုံခြုံရေး
သတင်းထုတ်ပြန်ချက်/ ဆောင်းပါး/ ကြေညာချက်
ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက် လုံခြုံမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒ
ဤပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက် လုံခြုံမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒသည်လူကြီးမင်း၏ မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့မှကောက်ယူစုဆောင်းထားသည်၊ မည်သည့် အတွက်ကြောင့်ကောက်ယူစုဆောင်းထားပြီး မည်သို့ကိုင်တွယ် ဆောင်ရွက် ထိန်းသိမ်းထားရှိကာ အခြားသူများနှင့် မည်သို့မည်ပုံ မျှဝေခြင်းပြုသည်ဆိုသည့် အချက်များကို ရှင်းလင်းထားပါသည်။ ယင်းတွင် လူကြီးမင်း၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သတင်းအချက်အလက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လူကြီမင်း၏ အခွင့်အရေး နှင့် ထိုအခွင့် အရေးများကို မည်သို့ကျင့်သုံးနိုင်သည်ကိုလည်း ရှင်းလင်းဖော်ပြထားပါသည်။
၁.၁ ကျွန်ုပ်တို့ တယ်လီနောမြန်မာလီမိတက်(“တယ်လီနောမြန်မာ”) သည် လူကြီးမင်းတို့၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်များလုံခြုံမှုကို လွန်စွာတန်ဖိုးထားသည့် အားလျော်စွာ သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို အလေးအနက်ထား၍ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သတင်းအချက်အလက်များကို မည်သို့မည်ပုံ စုဆောင်းကောက်ယူထားရှိ၍ မည်သို့မည်ပုံ ကိုင်တွယ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည် ဆိုသည်များကို သင်သိရှိနားလည်နေစေရန်မှာလည်း ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အရေးကြီးသော ကိစ္စရပ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။
၁.၂ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်များ နှင့် ဆင်းကဒ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း အပါအဝင် ဝန်ဆောင်မှုများ စတင်သုံးစွဲခြင်း(သို့) ဝန်ဆောင်မှုများ ရယူရန် မှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ကို လူကြီးမင်းလုပ်ဆောင်ရာမှတဆင့် ကောက်ယူရရှိသော လူကြီးမင်း၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ထိန်းသိမ်းကိုင်တွယ် ဆောင်ရွက်ထားရှိရာတွင် ဤ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များလုံခြုံမှုဆိုင်ရာမူဝါဒမှာ သက်ဆိုင်အကျုံးဝင်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ လုံခြုံမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒကို လူကြီးမင်းသုံးစွဲသော မည်သည့် ဝန်ဆောင်မှုသုံးစွဲခြင်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များနှင့်မဆို တွဲဖက်ဖတ်ရှုပါ။ ဝန်ဆောင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာကို သတ်မှတ်ဖေါ်ပြသည့် အဆိုပါစည်းကမ်းချက်များတွင် ကျွန်ုပ်တို့ ကောက်ယူစုဆောင်းထားသော သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သတင်းအချက်အလက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကောက်နှုတ်ဖေါ်ပြချက်များ ထပ်ဆောင်း ပါရှိကောင်းပါရှိနိုင်ပါသည်။
၁.၃ ဤပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက် လုံခြုံမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒသည် လူကြီးမင်း၏ မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့မှကောက်ယူစုဆောင်းထားသည်၊ မည်သည့် အတွက်ကြောင့်ကောက်ယူစုဆောင်းထားပြီး မည်သို့ကိုင်တွယ် ဆောင်ရွက် ထိန်းသိမ်းထားရှိကာ အခြားသူများနှင့် မည်သို့မည်ပုံ မျှဝေခြင်းပြုသည်ဆိုသည့် အချက်များကို ရှင်းလင်းထားပါသည်။ ယင်းတွင် လူကြီးမင်း၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သတင်းအချက်အလက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လူကြီမင်း၏ အခွင့်အရေး နှင့် ထိုအခွင့် အရေးများကို မည်သို့ကျင့်သုံးနိုင်သည်ကိုလည်း ရှင်းလင်းဖော်ပြထားပါသည်။
၂။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ အဓိက သဘောတရားများ
ကျွန်ုပ်တို့သည် လူကြီးမင်း၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သတင်းအချက်အလက်များကို ကောက်ယူစုဆောင်းပုံနှင့် သုံးစွဲပုံဆိုင်ရာများတွင် ပွင့်လင်းစွာ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ၊ အခြားသော သက်ဆိုင်သည့်ဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများနှင့် အမိန့်ကြော်ငြာစာများ (သက်ဆိုင်အကျုံးဝင်သည့် ဥပဒေများဟု ရည်ညွှန်းပါမည်)နှင့် ကိုက်ညီစွာ၊ ဤပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များလုံခြုံမှုရှိရေး မူဝါဒနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပြု အဖွဲ့များ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ လူကြီးမင်း၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး သတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ မှ ထိန်သိမ်းကိုင်တွယ် ဆောင်ရွက်ထားရှိပါမည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်များကို ဥပဒေနှင့်ညီညွတ်သော ကိစ္စရပ်များ အတွက်သာရည်ရွယ်၍ ထိန်းသိမ်းကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ပြီး ယင်းကဲ့သို့သော ရည်ရွယ်ချက်များကို ပေါက်မြောက်အောင်မြင်စေရန်လိုအပ်သော အချိန်အတိုင်းအတာအထိသာ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများအရ လိုအပ်သည့်အတိုင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများ နှင့် လိုင်စင်အရ ကျွန်တို့၏တာဝန်ရှိသည့်အတိုင်း နှင့် ယင်းတို့ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရှိရန် ခွင့်ပြုထားသည့်အတိုင်းသာ လူကြီးမင်း၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့က ထိန်းသိမ်း ထားရှိမည် ဖြစ်သည်။
လူကြီးမင်း၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ထိန်းသိမ်း ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လူကြီးမင်းအနေဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းတို့ကို အကောင်းဆုံးအနေဖြင့်ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် ဥပဒေအရ လိုအပ်ချက်ရှိသည့် အခြေအနေအချိန်အခါများတွင်သာမကဘဲ နည်းပညာပိုင်းအရဖြစ်နိုင်၍ သင့်တော်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ကယူဆသည့် အခြားသော အခြေအနေနှင့် အချိန်အခါတိုင်း တွင်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ အကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်ထားရှိပါမည်။
သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများအရ လူကြီးမင်း၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များလုံခြုံမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လူကြီးမင်း၏ အခွင့်အရေးများကို ကျွန်ုပ်တို့က လေးစားပါမည်။
လူကြီးမင်း၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်တို့ကို ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ စောင့်ရှောက် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သော လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များကို ကျွန်ုပ်တို့က အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ထားရှိပါမည်။
လူကြီးမင်း၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်တို့ကို ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ စောင့်ရှောက် ထိန်းသိမ်း ထားနိုင်ရေးသေချာစေခြင်းငှာ လိုအပ်သော ဆောင်ရွက်မှုများကို ကျွန်ုပ်တို့က စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြုလုပ်ထားရှိပါမည်။
အကယ်၍ အထက်ဖော်ပြပါ လူကြီးမင်း၏ သတင်းအချက်အလက်တို့ကို ပေးအပ်ရန် လူကြီးမင်းအနေဖြင့် ပျက်ကွက်ပါက သို့တည်းမဟုတ် ပေးအပ်သော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်တို့သည် ပြည့်စုံလုံလောက်ခြင်းမရှိပါက သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ကျေနပ်လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရာမရှိပါက “လူကြီမင်းတို့၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်တို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ သုံးစွဲပုံဆိုင်ရာ” အပိုဒ်(၇)တွင် အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသော ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုတို့ကို လူကြီးမင်း၏ လျှောက်ထားမှုအား ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် နှင့်/သို့မဟုတ် ပေးအပ်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့က ဆောင်ရွက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
၃။ ဥပဒေအရ မည်သူ့တွင် တာဝန်ရှိပါသနည်
၃.၁ လူကြီးမင်းသုံးစွဲလျက်ရှိသောဝန်ဆောင်မှု(များ)ကို ပေးအပ်လျက်ရှိသော တယ်လီနောမြန်မာက လူကြီးမင်း၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်တို့ကို ကောက်ယူစုဆောင်းသည့်ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ထိန်းသိမ်းကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်သည့် နည်းလမ်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အရ ဆုံးဖြတ်သူဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ “ဒေတာ ထိန်းချုပ်သူ” အဖြစ် ဆောင်ရွက်ရသူဖြစ်ပါသည်၊ ထို့ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်တို့ကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်လုံခြုံမှု စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမူဝါဒများ၊ ကြေညာစာနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများနှင့်အညီ ထိန်းသိမ်း ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်မှုရှိစေရေးကို သေချာစေရန် ဥပဒေအရ တာဝန်ရှိသူဖြစ်ပါသည်။
၃.၂ လူကြီးမင်း၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက် တို့ကို တယ်လီနော၏ လုပ်ငန်းစုဝင်ကုမ္ပဏီများအပါအဝင် တယ်လီနောလုပ်ငန်းစုနှင့် ကျွန်ုပ်တို့မှ ဝေမျှခြင်းပြုလုပ်ပါက ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်လုံခြုံမှု စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမူဝါဒများ၊ ဤကြေညာချက်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများနှင့်အညီ ထိန်းသိမ်းကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းပြုရန် ကျွန်ုပ်တို့က သေချာစွာ ဆောင်ရွက်ပါမည်။
၄။ လူကြီးမင်း၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်တို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ ကောက်ယူစုဆောင်းပုံ
၄.၁.၁ လူကြီးမင်းက ကျွန်ုပ်တို့ကို ပေးအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များ- ဥပမာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို လူကြီးမင်းဝယ်ယူသုံးစွဲခြင်းပြုသည့်အခါ
၄.၁.၂ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို လူကြီးမင်းသုံးစွဲသည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့က အလိုအလျောက် ကောက်ယူစုဆောင်းသည့် သတင်းအချက်အလက်များ
၄.၁.၃ အခြားတစ်ပါးသူများထံမှ ကျွန်ုပ်တို့ ရရှိကောင်းရရှိလာနိုင်သော လူကြီးမင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ
လူကြီးမင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်တို့ကို ကျွန်ုပ်တို့မှ ကောက်ယူစုဆောင်း သည်ဆိုသည်ကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ရှင်းလင်းအပ်ပါသည်။
၄.၁.၁ လူကြီးမင်းက ကျွန်ုပ်တို့ကို ပေးအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များ၊ ဥပမာ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကို လူကြီးမင်းက ဝယ်ယူသုံးစွဲမှုပြုသည့်အခါ
(က) ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများအနက်မှ တစ်ရပ်ရပ်ကို လူကြီးမင်းက သဘောတူညီလက်ခံ ဝယ်ယူပါက၊ ယင်းကဲ့သို့သော သတင်းအချက်အလက်အမျိုးအစားများတွင် ပါဝင်နိုင်သည်မှာ-
လူကြီးမင်း၏အမည်၊ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်/နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ်၊ မှတ်ပုံတင်/နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ဓာတ်ပုံ၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ စာပို့လိပ်စာ၊ မွေးနေ့သက္ကရာဇ်၊ ကျား/မနှင့် စတိုး၌ဖြစ်စေ၊ အွန်လိုင်းမှဖြစ်စေ၊ ဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် တယ်လီနောမြန်မာ၏ မည်သည့် အရောင်းမြှင့်တင်သည့်အခမ်းအနားများ၊ စစ်တမ်းများတွင်မဆိုပါဝင်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှု များအနက်မှ ဝန်ဆောင်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို လက်ခံရရှိနိုင်ရန် လူကြီးမင်းက စာရင်းပေးသွင်း မှတ်ပုံတင်ခြင်းပြုရာ၌ လူကြီးမင်းက ကျွန်ုပ်တို့ကိုပေးသော အခြားသောသတင်း အချက်အလက်များ၊
အကြွေးဝယ်ကဒ် သို့မဟုတ် ငွေဖြည့်သုံးကဒ်(debit card)ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ၊ ဘဏ်စာရင်း နံပါတ်နှင့် သက်ဆိုင်ရာဘဏ်၏ ရှင်းလင်းရေးကုဒ်နံပါတ် သို့မဟုတ် အခြားသော ဘဏ်လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် ပေးချေမှုဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များအပြင် လူကြီးမင်းအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ ပေးချေမှုပြုခဲ့သည့် ပမာဏ၊ နေ့ရက်နှင့် ပေးချေမှုပြုသည့်အချိန် အစရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ
ကျွန်ုပ်တို့ပေးအပ်သော ဝန်ဆောင်မှုများမှ လူကြီးမင်း ပိုမိုကြိုက်နှစ်သက်သည့် ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ဤကဲ့သို့သော အချက်အလက်တို့ကို လူကြီးမင်းမှပြုလုပ်ခဲ့သော လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် ပြုမူစီမံမှုများမှတဆင့် ပုံမှန်အားဖြင့် ကောက်ယူပါသည်
ကျွန်ုပ်တို့ထံတွင် လူကြီးမင်းဖွင့်လှစ်ထားသည့် လူကြီးမင်း၏ သုံးစွဲသူအကောင့်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်၊ ဥပမာ၊ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်လူကြီးမင်း ချုပ်ဆိုပြုလုပ်ထားသော စာချုပ် အမျိုးအစား၊ လူကြီးမင်း ဝယ်ယူထားသော ဝန်ဆောင်မှု တစ်ရပ်ရပ်နှင့် ပေးချေရန် တင်ရှိနေသည့်နေ့ရက်နှင့် ပေးချေမှုလက်ခံရရှိသည့် နေ့ရက်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်
ကျွန်ုပ်တို့နှင့်လူကြီးမင်း ချုပ်ဆိုပြုလုပ်ထားသော စာချုပ်၏ အထောက်အထားများ/ မှတ်တမ်းများ၊ ဥပမာ၊ သုံးစွဲသူမှတ်တမ်း၊ လူကြီးမင်းက ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ပေးပို့သော အီးမေးလ် သို့မဟုတ် စာတစ်စောင်၊ လူကြီးမင်းမှ တောင်းဆိုသော မည်သည့် မေတ္တာရပ်ခံတောင်းဆိုမှုဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ကို လူကြီးမင်း ပေးအပ်လာသော မည်သည့်အကြံပြုချက်မဆို တို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ
လူကြီးမင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆက်သွယ်ပြောကြားမှုတို့နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက် အလက်များ၊ ဥပမာ၊ အကူအညီပေးရန် လူကြီးမင်းကတောင်းဆိုမေတ္တာရပ်ခံလာမှု
ဈေးကွက်ဆိုင်ရာများ၊ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးများ၊ သတင်းများနှင့် နောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ် တိုးတက်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ လက်ခံရရှိလိုသည်ဟု အကယ်၍ လူကြီးမင်းက ရွေးချယ်ပြုလုပ်ထားခဲ့ပါက ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရန် လူကြီးမင်းက ကျွန်ုပ်တို့ကို ပေးအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ကျွန်ုပ်တို့၏ ပြိုင်ပွဲများ၊ ဈေးကွက်ဆိုင်ရာ အခမ်းအနားများ၊ ဆုမဲ/ကံစမ်းမဲ ဖောက်ပေးခြင်းများ၊ သုတေသနစစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းတို့အနက်မှ တစ်ခုခုတွင် ပါဝင်ရန် လူကြီးမင်းကသဘောတူ၍ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု သုံးစွဲသူများအကြား ဆွေးနွေးခြင်း သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆေင်မှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အခြားသော အကြံဉာဏ်ထင်မြင်ချက် များပေးရန်အတွက် လူကြီးမင်းနှင့် လူကြီးမင်း၏ အိမ်ထောင်စုအကြောင်းတို့ကဲ့သို့သော လူကြီးမင်းက ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ ပေးအပ်ထားသော ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာနှင့် အခြားသော သတင်းအချက်အလက်များ
appear.in သို့မဟုတ် online.no ကဲ့သို့သော ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင် ပေးအပ်သော အချို့သော ဝန်ဆောင်မှုများသည် ကျွန်ုပ်တို့ထံတွင် လူကြီးမင်း၏ အွန်လိုင်းအကောင့်တစ်ခုရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။
အကယ်၍ လူကြီးမင်းအနေဖြင့် အွန်လိုင်းအကောင့်တစ်ခုကို ပြုလုပ်လိုပါက လူကြီးမင်း၏အကောင့်အတွက် ထူးခြား စကားဝှက်တစ်ရပ်ကို ဖန်တည်းပြုလုပ်ပေးနိုင်ရန် လူကြီးမင်း၏ အမည်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်နံပါတ်/နိုင်ငံကူးလက်မှတ် အမှတ်၊ မွေးနေ့၊ ဖုန်းနံပါတ် နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာ တို့ကဲ့သို့သော အချို့သော ကိုယ်ရေး သတင်းအချက်အလက်တို့ကို ပေးအပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့က လူကြီးမင်းကိုတောင်းဆိုပါမည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ဆိုရပါမူ၊ ဤဝန်ဆောင်မှုများက လူကြီးမင်းကို မှတ်ပုံတင်ထားသော ပိုင်ရှင်တစ်ဦး၊ သို့မဟုတ် ယင်းထက်ပိုသော သုံးစွဲသူများအတွက် ပေးချေရန် တာဝန်ရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ လူကြီးမင်း၏ မိသားစုဝင်များကဲ့သို့သော အခြားသူများကိုပါ လူကြီးမင်း၏ အကောင့်ကို သုံးစွဲခွင့်ပြုရန် အကယ်၍ လူကြီးမင်းက ရွေးချယ်မည်ဆိုပါက ဤပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်များလုံခြုံမှု မူဝါဒကို ဖတ်ရှုထားရန် ၎င်းတို့အားလည်း ပြောကြားထားသင့်ပါသည်။
၄.၁.၂ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို လူကြီးမင်းသုံးစွဲစဉ် အလိုအလျောက်စနစ်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ ကောက်ယူစုဆောင်:သည့် သတင်းအချက်အလက်များ
(က) ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကို လူကြီးမင်းသုံးစွဲစဉ် လူကြီးမင်းနှင့် လူကြီးမင်း၏ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းကိရိယာတို့အကြောင်း အချို့သော သတင်းအချက်လက်တို့ကို အလိုအလျောက် စနစ်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့က ကောက်ယူထားပါမည်။
အလိုအလျောက်စနစ်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကောက်ယူသော လူကြီးမင်း၏ သတင်းအချက်အလက်သည် လူကြီးမင်းသုံးစွဲသော ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကို ဝင်ရောက်ရယူရန် သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုမှ အကျိုးကျေးဇူးများကို ရရှိနိုင်ရန် လူကြီးမင်းသုံးစွဲလျက်ရှိသော အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းကိရိယာအပေါ်တွင်မူတည်၍ ကွဲပြားမှုရှိပါမည်။
(ခ) ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကို ဝင်ရောက်ရယူရန် လူကြီးမင်း သုံးစွဲသော အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းကိရိယာနှင့် ဆော့ဖ်ဝဲအမျိုးအစားတို့၏ သတင်းအချက်အလက်၊ ဥပမာ၊ လူကြီးမင်းက အိုင်ဖုန်းကို သုံးစွဲခြင်းလော သို့မဟုတ် ဆမ်ဆောင်းဖုန်းကိုသုံးစွဲခြင်းလော၊ နှင့် လူကြီးမင်း၏ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းကိရိယာ၏ လုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာစနစ်(operating system)က ဘာအမျိုးအစားလဲ အစရှိသော သတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့က ကောက်ယူ စုဆောင်းပါသည်။
(ဂ) ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများကို လူကြီးမင်းသုံးစွဲသောအခါ အောက်ပါ အချက်အလက်တို့ ပါဝင်သော လူကြီးမင်း၏ ဆက်သွယ်မှုဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့က ကောက်ယူစုဆောင်:ပါသည်၊
လူကြီးမင်းက ခေါ်ဆိုသော/စာသားပေးပို့သော ဖုန်းနံပါတ် သို့မဟုတ် လူကြီးမင်းကို ခေါ်ဆိုသော/စာသားပေးပို့သော ဖုန်းနံပါတ်
ဖုန်းနှင့်စာသား ပေးပို့ သို့မဟုတ် လက်ခံရရှိသော နေ့ရက်နှင့်အချိန်
အဝင်ဖုန်း လက်ခံရရှိမှု/အထွက်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု ကြာမြင့်ချိန်
တည်နေရာဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက် အပိုဒ်တွင် ဆက်လက်ရှင်းလင်း ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ ဤခေါ်ဆိုမှုများဖြစ်ပွါးစဉ် လူကြီးမင်း၏ အနီးစပ်ဆုံးတည်နေရာ
လူကြီးမင်း၏ browsing ဝင်ရောက်ထားမှုဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ
ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ ရရှိသော ဝန်ဆောင်မှုအဆင့်အတန်းနှင့်အမျိုးအစား
(ဃ) ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်များအနက်မှ တစ်ခုခု နှင့်/သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ အွန်လိုင်း ဝန်ဆောင်မှုများအနက်မှ တစ်ခုခုကို လူကြီးမင်းဝင်ရောက်သောအခါ လူကြီးမင်း၏ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းကိရိယာ/ဖုန်းနှင့်သက်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက် သို့မဟုတ် အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းကိရိယာ/ဖုန်း နှင့် လူကြီးမင်းသုံးစွဲသော ကျွန်ုပ်တို့၏ အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့က ကောက်ယူစုဆောင်းပါသည်။ ယင်းသတင်းအချက်အလက်များတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် ပါဝင်သည်မှာ-
တစ်ကိုယ်ရေသုံးကွန်ပြူတာ(PC)၊ လက်ပ်တော့ပ်ကွန်ပြူတာ သို့မဟုတ် စမတ်ဖုန်း ကဲ့သို့သော လူကြီးမင်း၏ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းကိရိယာ၏ အိုင်ပီ(IP /အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ) လိပ်စာ
လူကြီးမင်း၏ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းကိရိယာ/ဖုန်းနှင့်သက်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက် သို့မဟုတ် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းကိရိယာ/ဖုန်းမာ်ဒယ်နှင့်သက်ဆိုင်သော သတင်းအချက် အလက်နှင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ဆက်တင်များ
လူကြီးမင်းက ဝန်ဆောင်မှုကို သုံးစွဲသော နေရာ၊ အချိန်နှင့် သုံးစွဲပုံဆိုင်ရာ အသေးစိတ် အချက်အလက်များ
(င) ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်များ (သို့) အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများအား လူကြီးမင်းမှ အသုံးပြုသည့်အခါ အောက်ဖော်ြပပါ အချက်အလက်များအား လူကြီးမင်းထံမှ ကောက်ယူမည် ဖြစ်သည်
ဘရောက်ဇာ အမျိုးအစားနှင့် ဗားရှင်း
browser plug-in အမျိုးအစားနှင့် ဗားရှင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့ လူကြီးမင်းဝင်ရောက်လည်ပတ်ကြည့်ရှု့မှုများအပါအဝင် ယင်းဝက်ဘ်ဆိုက်များမှ တဆင့် လူကြီးမင်းမှ ကူးပြောင်းကြည့်ရှုခဲ့သော ဝက်ဘ်ဆိုက်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှ တဆင့်လူကြီးမင်းမှ ကူးပြောင်းရောက်ရှိသွားခဲ့သော ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏ သတင်းအချက်အလက်များ
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင် လူကြီးမင်း ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့သော သို့မဟုတ် ရှာဖွေသော ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ထုတ်ကုန်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်များ
အချို့သော စာမျက်နှာသို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့သည့် အချိန်အတိုင်းအတာနှင့် အဆိုပါ စာမျက်နှာများနှင့် လူကြီးမင်း အပြန်အလှန်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပုံများ
(စ) ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်/သို့မဟုတ် အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများကို လူကြီးမင်း သုံးစွဲသည့်အခါတွင် အလိုအလျောက်စနစ်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကောက်ယူစုဆောင်းသော သတင်း အချက်အလက်များမှာ ကွတ်ကီးများနှင့် အလားတူနည်းပညာများမှတဆင့် ကောက်ယူ စုဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၄.၁.၃ တတိယကြားခံအဖွဲ့ထံမှ ကျွန်ုပ်တို့ ရရှိလာသော လူကြီးမင်း၏ သတင်းအချက်အလက်များ
(က) ကျွန်ုပ်တို့၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဝန်ဆောင်မှုများကို တတိယကြားခံအဖွဲ့၏ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ချိတ်ဆက်ပေါင်းစပ်ခြင်းပြုသောအခါ သတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့မှ ကောက်ယူ စုဆောင်းပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ လူကြီးမင်းက သဘောတူညီခွင့်ပြုသည့်အခါ နှင့်/သို့မဟုတ် ဥပဒေအရခွင့်ပြုပေးထားသောနေရာများတွင် Facebook ၊ Instagram သို့မဟုတ် Twitter တို့ကဲ့သို့သော လူမှုကွန်ရက်များနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကို ပေါင်းစပ်ချိတ်ဆက်ပေးခြင်းပြုပါသည်။ ယင်းကဲ့သို့သော သတင်းအချက်အလက်များတွင် ပါဝင်သည်မှာ-
(ဥပမာ၊ လူကြီးမင်းက ကျွန်ုပ်တို့ကိုပေးအပ်ခဲ့သော အိုင်ပီ(IP)လိပ်စာနှင့် လူကြီးမင်း၏ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းကိရိယာ/ဖုန်း စသည်တို့အပါအဝင်) အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သော သတင်းအချက်အလက်တို့ကဲ့သို့သော အချို့သော ယေဘုယျသတင်းအချက်အလက်များ၊ တည်နေရာအခြေခံဝန်ဆောင်မှုများကို လူကြီးမင်းသုံးစွဲခဲ့ပါက တည်နေရာဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ နှင့် လူကြီးမင်းက ကျွန်ုပ်တို့ကိုပေးအပ်ထားသော အခြားသော သတင်းအချက်အလက်များ သို့တည်းမဟုတ် လူကြီးမင်းက သဘောတူခွင့်ပြုသည့် အပေါ်တွင်မူတည်၍ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများအရ ခွင့်ပြုထားသည့်အ ပေါ်တွင်မူတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့ကောက်ယူစုဆောင်းသော သတင်းအချက်အလက်များနှင့်
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဝန်ဆောင်မှုကို တတိယကြားခံအဖွဲ့၏ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ ပေါင်းစပ်ပေးရန် တတ်စွမ်းနိုင်စေမည့် လူကြီးမင်း၏ တယ်လီနောသို့ လော့ဂ်အင်ဝင်ရောက်မှုဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက် နှင့် တတိယကြားခံအဖွဲ့၏ ဝန်ဆောင်မှုသို့ လော့ဂ်အင်ဝင်ရောက်မှုဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်တို့ကဲ့သို့သော သတင်းအချက်အလက်များကို လူပုဂ္ဂိုလ်မည်သူမည်ဝါဟု သတ်မှတ်ဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းမရှိသည့် ပုံစံဖြင့် အဆိုပါ တတိယကြားခံအဖွဲ့၏ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ကဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အချို့သော ဝန်ဆောင်မှု သီးသန့်/သတ်မှတ်ဝန်ဆောင်မှု ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ
၄.၂ ကျွန်ုပ်တို့၏ အချို့သော ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ဥပမာ၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ တေးသီချင်း သို့မဟုတ် နက္ခတ္တဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှု ကဲ့သို့သော အချို့သော ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် လူကြီးမင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အပိုဆောင်း သတင်းအချက်အလက်များ နှင့်/သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်း အချက်အလက်များကို အခြားသောနည်းလမ်းများ နှင့်/သို့မဟုတ် ထိုသတ်မှတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် သီးသန့်ရည်စူး၍ ကောက်ယူစုဆောင်းရန် လိုအပ်ကောင်းလိုအပ်နိုင်သည်။ ယင်းကဲ့သို့သော ကိစ္စရပ်များတွင် သတ်မှတ်ထားသော ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်း အချက်အလက်များကို ထိန်းသိမ်း ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထိုကိစ္စရပ်များနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်တွင် ဖော်ပြထားမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများအနက်မှ တစ်ရပ်ရပ်သော ဝန်ဆောင်မှုကို လူကြီးမင်းဝယ်ယူသုံးစွဲသည့်အခါတွင် လူကြီးမင်းအနေဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို ဖတ်ရှုခွင့်ရရှိမည့်ပြင် အဆိုပါစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို လူကြီးမင်းက လက်ခံသဘောတူညီမှုရှိကြောင်းကို အသိအမှတ်ပြုဖော်ပြပေးရန် တောင်းဆိုမည်ဖြစ်သည်။
၅။ တည်နေရာဆိုင်ရာ အချက်အလက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ကောက်ယူစုဆောင်းပုံ
၅.၁ အောက်ပါအခြေအနေနှင့်အချိန်အခါများတွင် တည်နေရာဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ကောက်ယူစုဆောင်းပါသည်-
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများကို လူကြီးမင်းသုံးစွဲသည့်အခါတွင် လူကြီးမင်း၏ ပထဝီအနေအထားအရ တည်နေရာကို အနီးစပ်ဆုံး ထုတ်ဖော်ညွှန်ပြနိုင်သော ကျွှန်ုပ်တို့ ကွန်ရက်ပေါ်တွင် တည်ရှိနေသည့် လူကြီးမင်း၏ ဖုန်း/အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းကိရိယာ နေရာနှင့်သက်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက် ဥပမာ၊ တာဝါတိုင် တည်နေရာကို ကျွန်ုပ်တို့ ကောက်ယူစုဆောင်းပါသည်။
မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများကို လူကြီမင်းထံသို့ ဆောင်ကျဉ်း ပေးအပ်နိုင်ရန်အတွက် လူကြီးမင်း၏ အနီးစပ်ဆုံးတည်နေရာကို ကျွန်ုပ်တို့ သိရှိနိုင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
တည်နေရာကို-အခြေခံသော ဝန်ဆောင်မှုများကို လူကြီးမင်းသုံးစွဲသည့်အခါ သို့မဟုတ် တည်နေရာ-အခြေခံ ဝန်ဆေင်မှုများကို လူကြီမင်းမှ ကမ်းလှမ်းခံရသည့်အခါ၊ နှင့် ထိုသို့သော ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် လူကြီးမင်း၏ တည်နေရာဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ထိန်းသိမ်းကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းပြုရန် လူကြီမင်းက သဘောတူညီချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့အားပေးအပ်ပြီးသောအခါ ၊ ကျွန်ုပ်တို့ ကွန်ရက်အတွင်း လူကြီးမင်း၏ တည်ရှိနေပုံ နှင့် လူကြီးမင်းသုံးစွဲသော တည်နေရာ-အခြေခံဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် ကမ်းလှမ်းမှု အပေါ်တွင်မူတည်၍ တာဝါတိုင် တည်နေရာ နှင့်/သို့မဟုတ် ကမ္ဘာ့တည်နေရာ အနေအထားပြစနစ် (('GPS')မှ ထုတ်ပေးသော တည်နေရာပြသတင်းအချက်အလက်တို့ကို ကျွန်ုပ်တို့သုံးစွဲနိုင်သည်။
ကမ္ဘာ့လုံးတည်နေရာ အနေအထားပြစနစ် (('GPS')သည် လူကြီးမင်း၏ ဖုန်း/အသုံးအဆောင်ကိရိယာ တည်နေရာနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်တို့ကို ပိုမိုတိကျစွာ ထုတ်ဖော်ညွှန်းပေးနိုင်ပါသည်။ လူကြီးမင်း၏ဖုန်း/အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းကိရိယာ သတ်မှတ်ပထဝီဧရိယာနယ်နိမိတ်သို့ ဝင်ရောက်လာမှုကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဂျီအိုဖင့်ဆိန်း (geo-fencing) နည်းပညာကို သုံးစွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။
၆. အခြားသော အရင်းအမြစ်များမှ ကောက်ယူစုဆောင်းသော သတင်းအချက်အလက်များ
၆.၁ လူကြီးမင်းအား ကျွန်ုပ်တို့ ပေးအပ်လျက်ရှိသော ဝန်ဆောင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လူကြီးမင်း၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် တတိယကြားခံအဖွဲ့များထံမှ ကောက်ယူစုဆောင်းပါသည်။ ဤကဲ့သို့ အချက်အလက်ကောက်ယူခြင်းကို လူကြီးမင်းက သဘောတူညီသည့်အခါတွင် သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများအောက်တွင် ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်လျက်ရှိသည့်အခါ သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုထားခြင်းရှိသည့် အခါတွင်သာ ကျွန်ုပ်တို့က ဆောင်ရွက်ပါမည်။
၆.၂ ဥပမာအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဝန်ဆောင်မှုကို တတိယကြားခံအဖွဲ့များ၏ ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပေါင်းစပ် ဆောင်ရွက်ပေးသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် တတိယကြားခံအဖွဲ့များ (ဥပမာ၊ မိတ်ဖက်လုပ်ငန်းများ၊ တဆင့်ခံကန်ထရိုက်များ၊ ပေးချေရေးနှင့် ပေးပို့ရေး ဝန်ဆောင်မှု၊ ကြော်ငြာ ကွန်ရက်များ၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာရေးဆောင်ရွက်ပေးသူများ၊ သတင်းအချက် ဖြည့်ဆည်းပေးသူများ) တို့နှင့်လည်း နီးကပ်စွာလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရသောကြောင့် ၎င်းတို့ထံမှလည်း လူကြီးမင်း အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်တို့ကို လက်ခံရရှိနိုင်ပါသည်။
၆.၃ လော့ဂ်အင်ဝင်ရောက်ရန်ဖြစ်စေ၊ အခြားနည်းများဖြစ်သော တယ်လီနောမြန်မာ၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်စာမျက်နှာ သို့မဟုတ် ကမ်းလှမ်းမှုအတွက် အပြန်အလှန် ပြောဆိုဆက်သွယ်မှုပြုရန်ဖြစ်စေ လူကြီးမင်း၏ လူမှုကွန်ရက် မီဒီယာ (ကိုယ်ရေးရာဇဝင်)/(နောက်ခံအကြောင်းအရာ) /ခရီဒင်းရှဲလ်(credentials) များကို လူကြီးမင်းသုံးစွဲပါက လူကြီးမင်း၏ “ကြိုက်နှစ်သက်မှုများ”/“likes”ပေးထားသည့် အရာများ/စိတ်ပါဝင်စားမှုများ နှင့် မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်း စာရင်းကဲ့သို့သော လူကြီးမင်း၏ လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာ (ကိုယ်ရေးနောက်ခံအကြောင်းအရာ)/ပရိုဖိုင်ကို ကျွန်ုပ်တို့က ကောက်ယူစုဆောင်းနိုင်ပါသည်။
ဤကဲ့သို့ သတင်းအချက်အလက်များ ကောက်ယူစုဆောင်ခြင်းကို လူကြီးမင်း၏ ဆိုရှယ်မီဒီယာ/လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာ ဝန်ဆောင်မှုပေးအပ်သူမှ ထိန်းချုပ်ဆောင်ဆောင်ရွက်ရန် ပေးအပ်ထားသော ရွေးချယ်စရာများမှတဆင့် ရွေးချယ်ဆောင်ရွက်၍ လူကြီးမင်းအနေဖြင့် ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။
၆.၄ ယင်းကဲ့သို့သော အခြားသော အရင်အမြစ်များမှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များနှင့် လူကြီးမင်းကိုယ်တိုင် ကျွန်ုပ်တို့ကိုပေးအပ်ထားသော သတင်းအချက်အလက် နှင့် အလိုအလျောက်အား ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ ကောက်ယူစုဆောင်းထားသော သတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့က ရောနှောပေါင်းစပ်နိုင်သည်။
၇။ လူကြီးမင်းတို့၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်များ/ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သတင်းအချက် အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ အသုံးပြုပုံ
၇.၁ လူကြီးမင်းအား ဝန်ဆောင်မှု ပေးအပ်နိုင်ရန်၊ ပံ့ပိုးကူညီပေးနိုင်ရန် နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်ရန်၊ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအလိုက် ပိုမိုသင့်တော်ကိုက်ညီမှုရှိသောဝန်ဆောင်မှု၊ သက်ဆိုင်မှုရှိသောဝန်ဆောင်မှုများ နှင့် လူကြီးမင်းအား ကျွန်ုပ်တို့ပေးအပ်လျက်ရှိသော ဝန်ဆောင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆက်သွယ်ပြောကြားနိုင်ရန် လူကြီးမင်း၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့က အသုံးပြုပါသည်။
၇.၂ ဈေးကွက်မြှင့်တင်းရေးဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များ၊ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ သတင်းများ၊ ကမ်းလှမ်းချက်များဖြင့် လူကြီးမင်းအား အခါအားလျော်စွာ ဆက်သွယ်နိုင်ရန် လူကြီးမင်း၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ ထိန်းသိမ်းကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းပြု သကဲ့သို့ လူကြီးမင်း၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့မှ အသုံးပြုပုံအား အောက်ပါ စာပိုဒ် တွင် အသေးစိတ်ဆက်လက်ဖော်ပြထားပါသည်။
၇.၃ လူကြီးမင်း၏ သတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့က အောက်ပါကိစ္စများ အတွက်လည်းအသုံးပြုပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့နှင့် သုံးစွဲသူကြားဆက်ဆံရေးတို့ကို ထိန်းသိမ်းစီမံဆောင်ရွက်ရန်၊ လူကြီးမင်း၏ တောင်းဆိုချက်/အော်ဒါများကို စီမံဆောင်ရွက် ဖြည့်ဆည်းပေးရန်၊ လူကြီးမင်းထံသို့ ငွေကျသင့်တောင်းခံလွှာနှင့် ဝယ်ယူမှုအမှာစာပေးပို့ရန်၊ နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ပေးချေမှုများကို ကောက်ခံနိုင်ရန်။
လူကြီးမင်းအား ကျွန်ုပ်တို့က ပေးအပ်လျက်ရှိသော ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လူကြီးမင်းနှင့် ဆက်သွယ်ပြောကြားနိုင်ရန်၊ ဝယ်ယူမှုများအတွက် နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများတွင် မှားယွင်းမှု များအတွက် အသိပေးအကြောင်းကြားချက်/ စာပေးပို့နိုင်ရန်၊ နှင့် လူကြီးမင်း၏ စုံစမ်းမေးမြန်းမှု များနှင့် အကြံပြုချက်များကို ပြန်လည်ဖြေကြားပေးနိုင်ရန်။
လူကြီးမင်းသုံးစွဲခဲ့ဖူးသော သို့မဟုတ် လက်ရှိသုံးစွဲလျက်ရှိသော ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဝန်ဆောင်မှု အစိတ်အပိုင်းများကိုကို ခြုံငုံကြည်ရှု သိရှိနိုင်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများတွင် ပြောင်းလဲမှုများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ၏ ပြောင်းလဲမှုများကို ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ရန်၊ လူကြီးမင်းသုံးစွဲလျက်ရှိသော ဝန်ဆောင်မှု၏ အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် လူကြီးမင်းရရှိနိုင်သော အကျိုးကျေးဇူးခံစားခွင့်များကို ထပ်မံသတိပေးနိုင်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများမှ ၎င်းတို့၏ အကျိုးကျေးဇူးများ အကောင်းဆုံး ရရှိနိုင်ရေးကို သေချာစေရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို သုံးစွဲရမည့် ပုံစံများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လူကြီးမင်းကို အကြံအဉာဏ်များပေးနိုင်ရန်။
သုံးစွဲသူနောက်ကြောင်းရာဇဝင်/ပရိုဖိုင် ပြုလုပ်ဖန်တည်းခြင်းအားဖြင့် အပါအဝင် လူကြီးမင်းနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်အလိုက် ပိုမိုသင့်တော်ကိုက်ညီမှုရှိသည့် အကြောင်းအရာများကို ကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့် လူကြီးမင်းနှင့်သင့်တော်သည့်အရာများကို အကြံပြုပေးခြင်းတို့ အပါအဝင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဆက်သွယ်ပြောကြားမှုများကို လူကြီးမင်းနှင့်ပိုမိုသင့်တော် ကိုက်ညီမှုရှိအောင် ဆောင်ရွက်ရန်။
လူကြီးမင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆက်သွယ်ပြောကြားမှုများကို ထိန်းကျောင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ပြီး ယင်းသတင်းအချက်အလက်များအား အသုံးပြုပြီး လေ့ကျင့်သင်ကြားရေး၊ အရည်အသွေးအာမခံနိုင်ရေး၊ ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ လူကြီးမင်းမှာယူသော ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှု အသေးစိတ်ကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ရန် သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ လူကြီးမင်း၏ မှာယူမှုများ၏ သို့မဟုတ် လူကြီးမင်းလက်ခံရရှိသော ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးနိုင်ရန် တည်းဟူသော ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အဆိုပါသတင်းအချက်အလက်များကို သုံးစွဲရန်။
ဌာနတွင်း လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုများအတွက် အခက်အခဲပြဿနာဖြေရှင်းရေး၊ ကွန်ရက် စီမံခွန့်ခွဲရေး နှင့် ကွန်ရက်ကို အစွမ်းကုန်အသုံးချနိုင်ရေး/ စွမ်းဆောင်ရည် အမြင့်ဆုံး အနေအထားဖြင့် အသုံးချနိုင်ရေးတို့အပါအဝင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများအား သုံးစွဲသူများသို့ အကောင်းဆုံး ပေးအပ်နိုင်ရန်။
လူကြီးမင်းဝယ်ယူထားပြီးသော ဝန်ဆောင်မှုများကို လူကြီးမင်းအစွမ်းကုန်အသုံးပြုနိုင်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့ ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများ လူကြီးမင်းနှင့် လူကြီးမင်း၏ ဖုန်း/အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းကိရိယာတို့အတွက် အထိရောက်ဆုံးသောပုံစံဖြင့် တင်ဆက် မှုရှိစေရေးကို သေချာမှုရှိစေရန်။
လူကြီးမင်းနှင့် အခြားသူများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန် ကြော်ငြာများ၏ ထိရောက်မှုကို တိုင်းတာနိုင်ရန် နှင့် သိရှိနိုင်ရန်၊ ထို့အပြင် လူကြီးမင်းနှင့်သင့်တော်သော ကြော်ငြာများကို လူကြီးမင်းထံသို့ ဆောင်ကျဉ်းပေးအပ်နိုင်ရန်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုသုံးစွဲသူများဖြစ်ကြသည့် လူကြီးမင်းနှင့် အခြားသူများအား လူကြီးမင်းကိုယ်တိုင်မှဖြစ်စေ၊ အခြားသူများမှဖြစ်စေ စိတ်ဝင်စားမှုရှိနိုင်သည့် ထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို အကြံပြုပေးခြင်းနှင့် ထောက်ခံချက်ပေးခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ကွန်ရက်ကို လုံခြုံစွာ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ထား၍ လူကြီးမင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ ဝန်ထမ်းများ၏ လုံခြုံရေးသေချာမှုရှိစေရန်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် အားထားနိုင်ရေး ကို မြှင့်တင်ပေးရန် နှင့် ဝန်ဆောင်မှု စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ နှင့်/သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေတို့ကို တရားမဝင်လုပ်ဆောင်ချက်မှုများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ ဖောက်ဖျက် ကျူးလွန်မှုများကို တားဆီးကာကွယ်နိုင်ရန် နှင့် အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရန်။
သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ နှင့် ဥပဒေပြု အဖွဲ့အစည်းများ၏ စည်းကမ်းချက်များအရ ကျွန်ုပ်တို့၏ တာဝန်များကို ပြည့်မီမှုရှိစေရန်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ အရောင်းဆိုင်ရာများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ သုံးစွဲသူဆိုင်ရာများ၊ ကွန်ရက်အသုံးပြုမှုများ (network traffic) နှင့် တည်နေရာ ဆိုင်ရာများ (location patterns) နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အလုံးစုံ ပေါင်းစပ်ထားသော စာရင်းအင်းကို ဖန်တီးရန် ကျွန်ုပ်တို့က ယင်းတို့ကို တတိယကြားခံအဖွဲ့ များသို့ ပေးအပ်ကောင်းပေးအပ်နိုင်သည်။ ယင်းကဲ့သို့သော အလုံးစုံပေါင်းစပ်ထားသော စာရင်းအင်းတို့တွင် ကျွန်ုပ်တို့ကသော်လည်းကောင်း၊ အခြားသူတစ်ဦးဦးကသော်လည်းကောင်း ပုံမှန်အားဖြင့် သုံးစွဲနိုင်ခြေရှိသော နည်းလမ်းများကို သုံးစွဲခြင်းများမှတဆင့် လူကြီးမင်း မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ဆိုသည်ကို အတည်ပြု ထုတ်ဖော်နိုင်သော သတင်းအချက်အလက်များ ပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ငန်း၏ အကျိုးစီးပွါးများကို တရားဥဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်သည့်အားဖြင့် ဈေးကွက်သုတေသန၊ ဈေးကွက်မြှင့်တင်ရေးလှုံ့ဆော်မှုနှင့် ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်ရေးလုပ်ရှားမှုကို ဆောင်ရွက်ရန်။
ယေဘုယျအလားအလာများကို သတ်မှတ်ဖော်ထုတ်နိုင်ရန်၊ သုံးစွဲသူများ၏ အပြုအမူနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကျွန်ုပ်တို့ ပိုမိုနားလည်သိရှိနိုင်ရန် နှင့် သုံးစွဲသူများအတွက် ဝန်ဆောင်မှုအသစ်များနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းလျက်ရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအလိုက် ကိုက်ညီအောင်ပြုလုပ်ထားသော ဝန်ဆောင်မှုများကို တတိယကြားခံအဖွဲ့များနှင့် လက်တွဲလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အလို့ငှာ သုတေသနပြုရန်၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာရန် နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကွန်ရက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအား သုံးစွဲမှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုံးသပ်လေ့လာခြင်းများကို အမည်မဖော်ဘဲသော်လည်းကောင်း၊ ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးချင်းအလိုက် အခြေခံအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်။
၇.၄ ကိစ္စရပ်အများစုတွင် ကျွန်ုပ်တို့က အလုံးစုံပေါင်းစပ်ထားခြင်းနှင့်/သို့မဟုတ် လူကြီးမင်း၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များကို လူကြီးမင်းဟု အတည်ပြုထုတ်ဖော်နိုင်ခြင်း မရှိသည့်အတိုင်းအတာထိ စီမံပြုလုပ်ထားရှိပါသည်။
သုတေသနပြုလုပ်ခြင်းအပါအဝင်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးစွဲသူများ၊ ၎င်းတို့၏ လိုအပ်ချက်များ နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို ၎င်းတို့မှ အသုံးပြုပုံနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျွန်ုပ်တို့ နားလည်သိရှိနိုင်ရေးကို အထောက်အကူပြုပေးနိုင်ရန်၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော တွေ့ကြုံခံစားမှုများကိုဖြစ်စေ၊ ဝန်ဆောင်မှုအသစ်များကိုဖြစ်စေ တည်ဆောက်ဖန်တီးနိုင်ရန် အလို့ငှာ ယင်းကဲ့သို့သော အလုံးစုံပေါင်းစပ်ထားခြင်း နှင့်/သို့မဟုတ် အမည်ဖော်နိုင်ခြင်းမရှိစေရန် စီမံပြုလုပ်ထားရှိသော သတင်းအချက်အလက်တို့ကို များပြားလှသော ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ ထိန်းသိမ်းကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။
၈။ လူကြီးမင်းတို့၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်တို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ မျှဝေသုံးစွဲပုံနှင့် ဖွင့်ဟထုတ်ဖော်ပြောဆိုပုံ
၈.၁ လူကြီးမင်:တို့၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်တို့ကို ကျွန်ုပ်တို့သုံးစွဲပုံဆိုင်ရာ အထက်ပါစာပိုဒ်တွင် ဖော်ပြထားသော ရည်ရွယ်ချက်များအတိုင်း တယ်လီနောလုပ်ငန်းစုအတွင်း လူကြီးမင်း၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်တို့ကို ကျွန်ုပ်တို့မှ မျှဝေကောင်းမျှဝေနိုင်သည်။ ဤပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်များကို တယ်လီနောလုပ်ငန်းစုက လွတ်လပ်စွာ/ အမှီအခိုကင်းစွာသော်လည်းကောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စားသော်လည်းကောင်း ထိန်းသိမ်းကိုင်တွယ် စီမံဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့က ယင်းသတင်းအချက်အလက်တို့ကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ လုံခြုံမှုဆိုင်ရာ ဤကြေညာချက်နှင့် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်အညီ အစဉ်အမြဲ ထိန်းသိမ်းကိုင်တွယ် စီမံဆောင်ရွက်ထားရှိပါမည်။
၈.၂ ကမ်းလှမ်းခြင်းပြုရန်၊ ပေးအပ်ရန်၊ ငွေတောင်းခံလွှာပေးပို့ပေးရန်၊ ပြင်ဆင်ရန်၊ နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်ရန်တည်းဟူသော မြောက်များလှသော လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် မိတ်ဖက်လုပ်ငန်းများ၊ ကျွန်ုပ်တို့အား ဝန်ဆောင်မှုပေးအပ်သူများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့မှ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရမှုများ ရှိပါသည်။
ယင်းကဲ့သို့သော ကိစ္စရပ်များတွင် လူကြီးမင်း၏ သတင်းအချက်အလက်များကို တတိယကြားခံ အဖွဲ့များသို့ ဖွင့်ဟထုတ်ဖော်ပြောကြားပေးထားရန် လိုအပ်ကောင်းလိုအပ်နိုင်ပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ဆိုရပါမူ အောက်တွင်ဖော်ပြပါအခြေအနေတို့တွင် လူကြီးမင်း၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်း အချက်အလက်များကို တတိယကြားခံ အဖွဲ့များနှင့် ကျွန်ုပ်တို့က မျှဝေပါမည်-
တတိယကြားခံအဖွဲ့၊ ကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် အခြားတစ်ပါးသော ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုပေးအပ်သူများအပါအဝင် အခြားသော ဝန်ဆောင်မှုပေးအပ်သူများ မဖြစ်မနေ ပါဝင်ရန်လိုအပ်လျက်ရှိသည်အခါ၊ ဥပမာ၊ ကျွန်ုပ်တို့က လူကြီးမင်းအား ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှုကိုပေးအပ်နိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကို အထောက်အကူပြုရန်/ရယူရန် သို့မဟုတ် တိုးချဲ့/ချဲ့ထွင်ရန် လူကြီးမင်းက ဒေသတွင်း သို့မဟုတ် နိုင်ငံရပ်ခြား ကွန်ရက်ပေါ်တွင် roamပြုလုပ်ရန် ရွေးချယ်သောအခါ
ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ သို့မဟုတ် လူကြီးမင်းတို့၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး သတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စား ထိန်းသိမ်းကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်သော အခြားသော ဒေတာ/သတင်းအချက်အလက် ထိန်းသိမ်းကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်သူများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့က ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်ရပါသည်။ ယင်းကဲ့သို့ကိစ္စရပ်များတွင် လူကြီးမင်း၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်း အချက်အလက်များအား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ထားမြဲထားရှိရေးကို သေချာမှုရှိစေရန် ကျွန်ုပ်တို့က စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားရှိပါမည်။ တတိယကြားခံ အဖွဲ့များကလည်း ကျွန်ုပ်တို့မျှဝေပေးသည့် ယင်းသတင်းအချက်အလက်တို့ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ ထိန်းသိမ်းကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ပြီး ယင်းအချက်အလက်တို့ကို ၎င်းတို့၏ ပုဂ္ဂလိက/ကိုယ်ပိုင်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် သုံးစွဲလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သတင်းအချက်အလက်တို့ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ချိတ်ဆက်ရန် လူကြီးမင်းရွေးချယ်ထားပြီးသော ဝန်ဆောင်မှုပေးအပ်လျက်ရှိသည့် တတိယကြားခံ အဖွဲ့များ(လူမှုကွန်ရက်ကဲ့သို့သော)နှင့် သတင်းအချက်အလက်များကို မျှဝေခြင်းပြုပါသည်၊ ထိုသို့မျှဝေရာတွင်လည်း ဤဝန်ဆောင်မှုများကို လူကြီးမင်း အသူံးပြုနိုင်ရန်အတွက် မျှဝေပေးခြင်းကို မရှိမဖြစ် ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည့် အတိုင်းအတာထိသာ မျှဝေပေးခြင်းပြုပါသည်။
လူကြီးမင်း၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်တို့ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး သတင်းအချက်အလက် လုံခြုံမှုဆိုင်ရာမူဝါဒ နှင့်အညီ ကျွန်ုပ်တို့က တတိယကြားခံ အဖွဲ့များ သို့/နှင့် မျှဝေခြင်းပြုပေးပါဟု လူကြီးမင်းက မေတ္တာရပ်ခံသည့်အခါတွင်
လူကြီးမင်း၏သတင်းအချက်အလက်များကို မျှဝေခြင်းပြုရန် လူကြီးမင်းက သဘောတူညီခွင့်ပြုချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့အားပေးအပ်ထားပြီးဖြစ်သည့် အခြေအနေတွင်
သတင်းအချက်အလက်များကို သုတေသနဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုံးသပ်လေ့လာခြင်း၊ ဈေးကွက်တင်ရောင်းချခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း နှင့် ကြော်ငြာခြင်းတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စားဆောင်ရွက်သူတို့နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ မျှဝေပါသည်။
လူကြီးမင်း၏ သတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ ဖွင့်ဟထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန် လိုအပ်လျက်ရှိခြင်း သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုထားခြင်း၊ ဥပမာ၊ လူကြီးမင်းကိုဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖြစ်စေ၊ အခြားတစ်စုံတစ်ဦးကိုဖြစ်စေ၊ အနှောက်အယှက်အန္တရာယ် သို့မဟုတ် ထိခိုက်နစ်နာပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းများမှ ကာကွယ်ပေးရန်အလို့ငှာ၊ သို့မဟုတ် ဝရမ်း၊ တရားရုံးတော်၏အမိန့် သို့မဟုတ် အခြားသောဥပဒေ သို့မဟုတ် နည်းဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်အရ လူကြီးမင်း၏ သတင်းအချက်အလက်များကို ဥပဒေအရစည်းကြပ်အရေးယူ ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်ဌာနများသို့ဖြစ်စေ၊ တရားရုံးသို့ဖြစ်စေ၊ ပြည်သူ့အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများသို့ဖြစ်စေ ဖွင့်ဟထုတ်ဖော် ပြောဆိုရန် ကျွန်ုပ်တို့မှ လိုအပ်သည့်အခါတွင်
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့က ရောင်းချရန်၊ ဝယ်ယူရန်၊ ပူးပေါင်းရန် သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းကို အခြားတနည်းနည်းအားဖြင့် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းဆောင်ရွက်ပါက၊ လူကြီးမင်း၏ သတင်းအချက်အလက်များကို အလားအလာရှိသော သို့မဟုတ် အမှန်တကယ် ဝယ်ယူမည့်သူများ၊ ရောင်းချသူများ သို့မဟုတ် အစုစပ်လုပ်ကိုင်သူများ/မိတ်ဖက်လုပ်ငန်းများ၊ ၎င်းတို့၏ အကြံပေးများ/အတိုင်ပင်ခံများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့မှမျှဝေနိုင်သည်
၈.၃ လူကြီးမင်း၏ သတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ မျှဝေခြင်းပြုသည့်အခါ ထိုသို့လက်ခံရှိသူမှ လူကြီးမင်း၏ ပုဂ္ဂိလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်များလုံခြုံမှုရှိစေရေးအတွက် ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ထားရေး၊ လူကြီးမင်း၏ သတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ညွှန်ကြားချက်အောက်တွင် လုံခြုံစွာထိန်းသိမ်းထားရှိရေးနှင့် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်အညီ ထိန်းသိမ်းကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ရေးကို သေချာမှုရှိစေရန် ကျွန်ုပ်တို့က စီစဉ်ဆောင်ရွက် ပြုလုပ်ထားရှိပါမည်။
ယင်းကဲ့သို့စီစဉ်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများတွင် တတိယကြားခံအဖွဲ့များ နှင့် သင့်တော်ဆီလျော်သည့် စာချုပ်များပြုလုပ်ချုပ်ဆို၍ ဆောင်ရွက်ခြင်းများပါရှိနိုင်သည်။ လူကြီးမင်း၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး သတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ဒေတာစင်တာများတွင်လည်းကောင်း၊ ဆာဗာများနှင့် မြန်မာပြည်ပြင်ပတွင် ရှိသော နေရာများ၌လည်းကောင်း သိုမှီးသိမ်းဆည်းထားရှိနိုင်သည်။
၈.၄ ကျွန်ုပ်တို့ ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်မှုပြုထားသော လူကြီးမင်းတို့၏ သတင်းအချက်အလက်များကို လူကြီးမင်း၏ သဘောတူညီချက်မပါရှိဘဲ တတိယကြားခံအဖွဲ့များထံသို့ ကျွန်ုပ်တို့က ရောင်းချခြင်းပြုမည်မဟုတ်ပါ။
၉။ ဈေးကွက်ဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက် လူကြီးမင်းတို့၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်း အချက်အလက်တို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ သုံးစွဲပုံ
၉.၁ တယ်လီနော၏ သုံးစွဲသူတစ်ဦးအဖြစ် လူကြီးမင်း ရရှိခံစားမှုများကို တိုးမြှင့်ပေးနိုင်စေရန် နှင့် လူကြီးမင်းနှင့်ပိုမိုသင့်တော်သည့် ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့က လူကြီးမင်းအားပေးအပ်လိုပါသည်။ ထို့ကြောင့် လူကြီးမင်း၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ၊ လူကြီးမင်း၏ ကြိုက်နှစ်သက်မှု၊ ဝယ်ယူအားပေးမှုနှင့် စိတ်ပါဝင်စားမှုတို့အပေါ်တွင်အခြေခံ၍ ဈေးကွက်ဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ပြောကြားမှုများ၊ ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့နှင့် သတ်မှတ်ရွေးချယ်ထားသော တတိယကြားခံအဖွဲ့များက လူကြီးမင်းထံသို့ပေးပို့ရန် ကျွန်ုပ်တို့ကို လူကြီးမင်း ပေးအပ်ထားခဲ့သော သတင်းအချက်အလက်များကို သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
ဈေးကွက်ဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် လူကြီးမင်း၏ သတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်သုံးစွဲပုံနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လူကြီးမင်းတွင် ရွေးချယ်ရန်နှင့် ထိန်းချုပ်ရန် ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်း ရှိပါသည်။
ဆိုလိုသည်မှာ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရန် ဥပဒေအရ လိုအပ်သည့်နေရာများတွင် လူကြီးမင်း၏ သတင်းအချက်အလက်များကို ဈေးကွက်ဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် သုံးစွဲခြင်းမပြုမီ လူကြီးမင်း၏ သဘောတူခွင့်ပြုချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ရယူမည်ဟု ဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါသည်။ လူကြီးမင်းအနေဖြင့်လည်း မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို ယင်းကဲ့သို့ ဈေးကွက်တင်ရောင်းချရေးဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ပြောကြားမှုများကို ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ လက်ခံရရှိခြင်းမရှိစေရန် ရွေးချယ်ပယ်ဖျက် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နောက်ထပ်သတင်း အချက်အလက်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ call center (တယ်လီနောမြန်မာ သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ၉၇၉ ကို ခေါ်ဆိုပါ-) သို့တည်းမဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ တယ်လီနော ဝက်ဘ်ဆိုက်- www.telenor.com.mm သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့ လေ့လာနိုင်ပါသည်။
၉.၂ အကယ်၍ လူကြီးမင်းက လက်ခံရရှိခြင်းမရှိရန် ရွေးချယ်ပယ်ဖျက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါက ဈေးကွက်တင်ရောင်းချရေးဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ပြောကြားချက်များကို လူကြီးမင်း လက်ခံရရှိတော့မည် မဟုတ်သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ပေးအပ်ထားသော ဝန်ဆောင်မှုနှင်စပ်လျဉ်းသည့် ဆက်သွယ်ပြောကြားမှုများကို လူကြီးမင်းအနေဖြင့် ဆက်လက်ရရှိနေဦးမည်ဆိုသည်ကို ကျေးဇူးပြု၍ သတိချပ်စေလိုပါသည်။
၁၀။ ကွတ်ကီး (cookies )နှင့် အလားတူနည်းပညာများကို ကျွန်ုပ်တို့ သုံးစွဲပုံ
၁၀.၁ ကွတ်ကီး (cookies)၊ clear gifs သို့မဟုတ် pixel tags ဟုလည်းခေါ်သော ဝက်ဘ် ဘီကွန်စ် (web beacons) နှင့် အလားတူနည်းပညာများကိုသုံးစွဲခြင်းဖြင့် သတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့က အလိုအလျောက်ကောက်ယူပါသည်။
(က) ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ လူကြီးမင်း၏ ဘရောက်ဇာ (browser)သို့ ပေးပို့နိုင်သော အနည်းငယ်သော သတင်းအချက်အလက်တို့ပါဝင်သော စာသားဖိုင်ကို ကွတ်ကီး (cookies)ဟုခေါ်ပါသည်၊ ထို့နောက်ယင်းကို လူကြီးမင်း၏ ကွန်ပြူတာတွင် အမည်မဖော်နိုင်သော တက်ဂ်တစ်ခုအဖြစ် ပြုလုပ်ထားမည်ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ကွန်ပြူတာကိုသာ ထုတ်ဖော်အတည်ပြုခြင်းရှိ၍ လူကြီးမင်းကိုမူ အတည်ပြုထုတ်ဖော်ခြင်းမရှိပါ။
(ခ) လူကြီးမင်း၏ သုံးစွဲသူအဖြစ်တွေ့ကြုံခံစားမှုများကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ လူကြီးမင်း ထပ်မံပြန်လည်လာရောက်ကြည့်ရှု့သည့်အခါ လူကြီးမင်း၏ စိတ်ပါဝင်စားမှုနှင့်ကိုက်ညီသည့် အွန်လိုင်းကြော်ငြာများအားလူကြီးမင်းကို ပြသပေးနိုင်ရန် လူကြီးမင်း၏ သုံစွဲမှုပုံစံဆိုင်ရာနှင့် စိတ်ဝင်စားမှုရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များအား ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်များကို လူကြီးမင်း လာရောက်/ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့သည့်အခါတွင် ကောက်ယူ စုဆောင်းပါသည်။
ကွတ်ကီး(cookies)တစ်ခုကို လက်မခံမီ ၎င်းကို လက်ခံသင့် မခံသင့် လူကြီးမင်းအနေဖြင့် စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရန် အခွင့်အရေးပေးသည့်အနေဖြင့် လူကြီးမင်းအား အချက်ပြအသိပေးရန် လူကြီးမင်း၏ ဘရောက်ဇာ(browser) ကို စီစဉ်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ထားနိုင်ပါသည်။ ကွတ်ကီး (cookies) များကို ပိတ်ထားရန် လူကြီးမင်း၏ ဘရောက်ဇာကို စီစဉ်ပြုလုပ်ထားနိုင်ပါသည်၊ သို့ရာတွင် အကယ်၍ လူကြီးမင်းထိုသို့ဆောင်ရွက်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏ အချို့သော ဝက်ဘ်ဆိုက်များ ကောင်းမွန်စွာ လည်ပတ်လုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းနှင့် ကြော်ငြာခြင်း အတွက် ရည်ရွယ်၍လည်း ကွတ်ကီး (cookies)များနှင့် အလားတူနည်းပညာများကို အသုံးပြုပါသည်။
(ဂ) ကြော်ငြာခြင်းရည်ရွယ်ချက်အတွက် အပါအဝင် ကွတ်ကီး(cookies) အများစုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်များကို လူကြီးမင်း လာရောက်ကြည်ရှု့စဉ် ကွတ်ကီးများ (cookies) မသုံးစွဲစေလိုကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ကို ပြောဆိုရန် လူကြီးမင်းတွင် အခွင့်အရေးရှိပါသည်။
ကြောငြာခြင်းအတွက်ရည်ရွယ်ချက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သုံးစွဲသည့် ကွတ်ကီးများ(cookies)နှင့် ပါဝင် ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရန် အကယ်၍ လူကြီးမင်းရွေးချယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါက၊ ကွတ်ကီးများ (cookies)သုံးစွဲခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ရပ်စဲပစ်ပါမည်။ သို့ရာတွင် ဤသို့ဆိုခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ လူကြီးမင်းလာရောက်စဉ် ကြော်ငြာများကို လူကြီးမင်းတွေ့မြင်ရလိမ့်မည် မဟုတ်ဟု ဆိုလိုရင်းမဟုတ်ကြောင်းကို ကျေးဇူးပြု၍ သတိချပ်စေလိုပါသည်၊ ၎င်း၏ဆိုလိုရင်းမှာ လူကြီးမင်း မြင်တွေ့ရမည့် ကြော်ငြာများသည် လူကြီးမင်း၏ စိတ်ဝင်စားမှုနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သည့် ကြော်ငြာများ မဟုတ်ကြောင်း ဆိုလိုရင်းသာဖြစ်ပါသည်။
(ဃ) အကယ်၍ ကွတ်ကီးစ်များ(cookies) အကြောင်းကို ထပ်မံသိရှိလိုပါက www.aboutcookies.org. တွင် ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။
၁၀.၃ ပစ်ဇဲလ် တဂ် (Pixel tags)
(က) ကွတ်ကီး၊ clear gifs သို့မဟုတ် ဝက်ဘ် ဘီကွန်စ် (web beacons)ဟုလည်းသိကြသော (ပစ်ဇဲလ် တဂ်)တစ်ခုသည် မမြင်တွေ့နိုင်သည့် တဂ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ယင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ အချို့သော စာမျက်နှာများအပေါ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ ထားရှိခြင်း ရှိနိုင်ပါသည်။ ဤစာမျက်နှာများသို့ လူကြီးမင်း ဝင်ရောက်သောအခါ ပစ်ဇဲလ်တဂ်က လာရောက်လည်ပတ်မှု၏ မူလအခြေခံ အသိပေး အကြောင်းကြားချက်တစ်ရပ်ကို လည်ပတ်ထုတ်လုပ်ပေးပါသည်။
များသောအားဖြင့်၊ ၎င်းတို့သည် ကွတ်ကီးများ(cookies) နှင့် အတူပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်လေ့ရှိ၍ ကွန်ပြူတာတစ်ခုမှ စာမျက်နှာတစ်ခုကို လာရောက်လည်ပတ်/ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့စဉ် မှတ်တမ်းတင်ခြင်းပြုပါသည်။ အကယ်၍ လူကြီးမင်းက ပစ်ဇဲလ်တဂ် ကွတ်ကီးများကို ပိတ်ထားသော်လည်း ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ အမည်မသိလာရောက်လည်ပတ်မှု တစ်ရပ်အဖြစ် ထောက်လှမ်းသိရှိနေမည်သာဖြစ်ပါသည်။
(ခ)“စမတ်ပစ်ဇဲလ်” (smart pixel) ဆိုသည်မှာ သေးငယ်သော ဂရပ်ဖစ်ဖိုင်တစ်ခုဖြစ်၍ ၎င်းကို အီးမေးလ်အတွင်းတွင် မြှုပ်နှံ/ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားပြီး တစ်မူထူးခြားလှသည့် အတည်ပြု သတ်မှတ်ဖော်ထုတ်ပေးသည့် အရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
စမတ်ပစ်ဇဲလ် (smart pixel) ကို အီးမေးလ်ဖြင့် သို့မဟုတ် သတင်းပေးစာများဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ လှုံ့ဆော်လှုပ်ရှားမှုတွင် သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ပေးပို့သော အီးမေးလ်ကို အောင်မြင်စွာ ဖွင့်ဖောက်စစ်ဆေးကြည့်ရှု့ခြင်းရှိမရှိကို ကျွန်ုပ်တို့ ခြေရာခံနိုင်ရန် အခွင့်ရစေ၍ လက်ခံရရှိသူ(များ)၏ လုပ်ဆောင်ချက်ဆိုင်ရာ အချို့သော သတင်းအချက်အလက်များကို မှတ်တမ်းတင်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။
၎င်းတို့က ပုံများကို အီးမေးလ်အတွင်းတွင်(နှင့် များစွာသော အီးမေးလ် client software တို့သည် ပုံများကို အလိုအလျောက်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်းကို ငြင်းပယ်သည့် အစီအမံများကို ပုံသေအဖြစ် ပြုလုပ်စီစဉ်ထားရှိကြပါသည်) ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် ထက်သန်စွာရွေးချယ် ဆောင်ရွက်သည့် ကိစ္စများမှတစ်ပါး ၎င်းတို့လက်ခံရရှိသော အီးမေးလ်အတွင်းတွင် ပုံများကို အလိုအလျောက် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်းများကို ငြင်းပယ်ရန် အီးမေးလ် ကလိုင်းရင့်ဆော့ဖ်ဝဲ တွင် စီစဉ်ပြုလုပ်ထားသော သုံးစွဲသူများကို ဝန်ဆောင်ပေးခြင်းရှိမည်မဟုတ်ပါ။
၁၁။ လူကြီးမင်းတို့၏ သတင်းအချက်အလက်တို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ထိန်းသိမ်းထားရှိသည့် ကာလအတိုင်းအတာ
၁၁.၁ သက်ဆိုင်ရာဥပဒေ နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းလိုင်စင်တွင်ပါဝင်သော တာဝန်အရ၊ ထိုထက် ပိုမိုကြာရှည်စွာ ထိန်းသိမ်းထားရှိရန် လိုအပ်ခြင်းမှတစ်ပါး ကျွန်ုပ်တို့သည် လူကြီးမင်း၏ သတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ ထိုသို့ကောက်ယူစုဆောင်းသော၊ ထိန်းသိမ်းကိုင်တွယ် ဆောင်ရွက်သော ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လိုအပ်သည်ထက် ပိုမိုကြာရှည်စွာ ထိန်းသိမ်း ထားရှိမည်မဟုတ်ပါ။
၁၂။ လူကြီးမင်းတို့၏ သတင်းအချက်အလက်တို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ထားပုံ
၁၂.၁ ကျွန်ုပ်တို့၏ တယ်လီနောလုပ်ငန်းစုအတွင်း ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များလုံခြုံမှု အရာရှိများ ကွန်ရက်တစ်ခု ရှိပါသည်။ လုပ်ငန်းလုံခြုံရေး(business security)ဌာနနှင့်အတူ ၎င်းတို့၏ တာဝန်မှာ လူကြီးမင်း၏ သတင်းအချက်အလက်တို့ကို ထိန်းသိမ်းကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်များ လုံခြုံမှုဆိုင်ရာ ဤကြေညာချက် နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုရှိရေးကို သေချာမှုရှိစေရန်ဖြစ်သည်။
၁၂.၂ လူကြီးမင်း၏ သတင်းအချက်အလက်များကို အခွင့်မဲ့ ဝင်ရောက်ရယူခြင်း၊ ကောက်ယူခြင်း၊ သုံးစွဲခြင်း၊ ထုတ်ဖော်ခြင်း၊ ကူးယူခြင်း၊ ပြင်ဆင်ပြုလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် စွန်ပယ်ဖျက်ဆီးပစ်ခြင်းတို့မှ ကာကွယ်ရန် သင့်တော်သည့် နည်းပညာပိုင်းနှင့် အဖွဲ့အစည်းပိုင်းဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးအစီအမံများကို ကျွန်ုပ်တို့က စီစဉ်ဆောင်ရွက်ချမှတ်ထားရှိပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အထူးကျွမ်းကျင်သူများအဖွဲ့သည် ဤလုံခြုံရေး အစီအမံများကို ပုံမှန် စောင့်ကြည့်လေ့လာ သုံးသပ်လျက်ရှိပါသည်။
၁၂.၃ ဝန်ဆောင်မှုပေးအပ်သူများကို သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စား ထိန်းသိမ်းကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ရန် ဝန်ဆောင်မှုပေးအပ်သူများကို ကျွန်ုပ်တို့သုံးစွဲသည့်အခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စား ၎င်းတို့ ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ရသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်များကို ကာကွယ်နိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် သင့်တော်သော လုံခြုံရေးအစီအမံများအတိုင်း ၎င်းတို့ လိုက်နာဆောင်ရွက် ပြုလုပ်ကျင့်သုံးရန် ကျပ်မတ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။
၁၃။ ဒေတာများ လွှဲပြောင်း မျှဝေခြင်း
၁၃.၁ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ ပိုမိုတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းလာစေရန် နှင့် ချဲ့ထွင်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ လူကြီးမင်း၏ သတင်းအချက်အလက်တို့ကို မြန်မာပြည်၏ ပြင်ပသို့/နိုင်ငံရပ်ခြားတိုင်းပြည်များသို့ ကျွန်ုပ်တို့က လွှဲပြောင်းပေးနိုင်ပါသည်။
သုံးစွဲသူဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့် အခြားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမူဘောင်များအောက်တွင် ခွင့်ပြုထားသည့်အတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့က လွှဲပြောင်းပေးနိုင်ပါသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်များကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြင်ပသို့ လွှဲပြောင်း မျှဝေသည့်အခါတိုင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ မိတ်ဖက်လုပ်ငန်းများ သို့မဟုတ် တယ်လီနောလုပ်ငန်းစုက ၎င်းတို့လက်ခံရရှိထားသော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို ကာကွယ်ပေးမည့် သင့်တော်သည့် အစီအမံများကို စီစဉ်ချမှတ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် နှင့် ယင်းကဲ့သို့သော သတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီသာလျှင် ထိန်းသိမ်း ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းပြုရန် ကျွန်ုပ်တို့က သေချာစွာဆောင်ရွက်ထားရှိပါသည်။
၁၃.၂ ယင်းကဲ့သို့သော ဒေတာများလွှဲပြောင်း မျှဝေခြင်းများအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများနှင့်အညီ လိုက်နာမှုရှိစေရန် ပဋိညာဉ်/စာချုပ်ဖြင့် လွှမ်းခြုံ၍ တာဝန်တင်ရှိစေသော အစီအမံများကို ကျွန်ုပ်တို့က သင့်တော်သလို အကောင်အထည်ဖော် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားရှိပါသည်။
၁၄။ လူကြီးမင်းတို့၏ အခွင့်အရေးများ
၁၄.၁ လူကြီးမင်းနှင့်ဆက်စပ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ ကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းထားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လူကြီးမင်းတွင် အချို့သော အခွင့်အရေးများရှိပါသည်။ လူကြီးမင်းအနေဖြင့် မိမိ၏ အခွင့်အရေးကို ကျင့်သုံးရန် တတ်စွမ်းနိုင်စေမည့် အစီအမံများ နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်/လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ကျွန်ုပ်တို့ အသင့်ပြုလုပ်ထားရှိပြီးဖြစ်သည့်ပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ ကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းထားသည့် လူကြီးမင်း၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်များ နှင့် ဆက်စပ်၍ လူကြီးမင်း၏ မေတ္တာရပ်ခံတောင်းဆိုချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့က သေချာစွာ ဆောင်ရွက်ထားရှိပါသည်။
၁၄.၂ လူကြီးမင်း၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်စာရင်းအတိုင်း ပြုစုထားပါသည်-
(က) လူကြီးမင်း၏ သတင်းအချက်အလက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဝင်ရောက်ရယူပိုင်ခွင့်ရှိခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့ ကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းထားသော လူကြီးမင်း၏ အကြောင်းအရာ သတင်းအချက်အလက် မိတ္တူတစ်စောင်ကို လူကြီးမင်းက မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို ကျွန်ုပ်တို့၏ care@telenor.com.mm သို့ ဆက်သွယ်၍ မေတ္တာရပ်ခံတောင်းဆိုနိုင်ပါသည်၊ သို့တည်းမဟုတ် လူကြီးမင်း၏ အွန်လိုင်းအကောင့်မှတဆင့် တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်၍ သတင်းအချက်အလက်အများစုကို တိုက်ရိုက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ လူကြီးမင်းမေတ္တာရပ်ခံတောင်းဆိုမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို ဆက်လက်ပေးအပ်နိုင်ရန် လူကြီးမင်း၏ မေတ္တာရပ်ခံတောင်းဆိုချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ပြန်ကြားခြင်းမပြုမီ လူကြီးမင်း မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းကို သက်သေထူအတည်ပြုနိုင်ရန်အတွက် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ မေးခွန်းအချို့ကို ကျွန်ုပ်တို့က လူကြီးမင်းကို မေးမြန်း၍ မှန်ကန်ကြောင်း သက်သေထူ အတည်ပြုခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ပါမည်
လူကြီးမင်း၏ မေတ္တာရပ်ခံတောင်းဆိုလာမှုကို သင့်တော်သည့် အချိန်ကာလအပိုင်းအခြားအတွင်း ကျွန်ုပ်တို့က ပြန်ကြားပါမည်။ မည်သည့်ကိစ္စရပ်တွင်မဆို သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများတွင် သတ်မှတ်ပြဌာန်းထားသော အဖိုးအခများကို ပေးချေသည့်အပေါ်တွင်မူတည်၍ သတ်မှတ်ရေးဆွဲထားသည့် အချိန်ကာလဇယားအတွင်း လူကြီးမင်း၏ မေတ္တာရပ်ခံတောင်းဆိုချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့က ပြန်လည်ဖြေကြားသွားပါသည်။
(ခ) ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အမှန်ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိခြင်း
လူကြီးမင်း၏ သတင်းအချက်အလက်များနှင့်စပ်လျည်း၍ အမှန်ပြင်ရန် သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်၍ လူကြီးမင်းအနေဖြင့် မေတ္တာရပ်ခံနိုင်ပါသည်၊ သို့မဟုတ် လူကြီးမင်း၏ အွန်လိုင်းအကောင့်မှတဆင့် ဝင်ရောက်၍ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်များ နှင့် ဆက်စပ်နေသော ဘေလ်/ငွေတောင်းခံလွှာပေးပို့ရန်လိပ်စာနှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာတို့ကို ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ လူကြီးမင်းက ကျွန်ုပ်တို့ကို ပေးအပ်သော သတင်းအချက်အလက်များ၏ မှန်ကန်မှု၊ တိကျသေချာမှု နှင့် ပြီးပြည့်စုံမှုရှိစေရေးကို သေချာစေရန်မှာ လူကြီးမင်း၏ တာဝန်ဖြစ်သည့်ပြင် လူကြီးမင်း၏ အွန်လိုင်အကောင့်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို အချိန်နှင့်တစ်ပြည်းညီ ဖြစ်စေရန် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားရမည်။
(ဂ) ကျွန်ုပ်တို့အား တိကျမှန်ကန်၍ ပြီးပြည့်စုံသော သတင်းအချက်အလက်များကို ပေးအပ်ရန်မှာ လူကြီးမင်း၏ တာဝန်သာဖြစ်ပါသည်။ ယင်းကဲ့သို့သတင်းအချက်အလက်များ ပြောင်းလဲသွားသည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့ကို အသစ်တစ်ဖန်အကြောင်းကြားအသိပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ သို့မှသာ တတ်စွမ်းနိုင်သမျှ အကောင်းဆုံးသော သုံးစွဲသူဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံများ၊ ခံစားမှုများနှင့် လူကြီးမင်းကို ကျွန်ုပ်တို့က ဆောင်ကျဉ်းပေးအပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၁၅.၁ ယေဘုယျအားဖြင့်ဆိုရပါမူ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများသည် အသက်(၁၃)အောက်ငယ်ရွယ်သော ကလေးသူငယ်များကို ရည်စူးထားခြင်းမရှိသဖြင့် ၎င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သော အချက်အလက်များကို တမင်ရည်ရွယ်၍ ကောက်ယူစုဆောင်ထားခြင်းမျိုး မရှိပါ။ ကောက်ယူစုဆောင်ထားခြင်းမပြုသင့်သည့် အသက်(၁၃)နှစ်အောက်ငယ်ရွယ်သော ကလေးသူငယ်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်တို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ ကောက်ယူစုဆောင်းထားသည်ဟု အကယ်၍ ကျွန်ုတို့ သိရှိသတိပြုမိလာပါက၊ ဥပဒေအရ ယင်းတို့ကို ထိန်းသိမ်းထားရှိရန် လိုအပ်ခြင်းမှတစ်ပါး အဆိုပါသတင်းအချက်အလက်များကို စောနိုင်သမျှဆောလျင်စွာ ဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့က စီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။
၁၅.၂ သို့ရာတွင် အချို့သော ဝန်ဆောင်မှုများမှာ အသက်(၁၃)နှစ်အောက်ငယ်ရွယ်သော ကလေးသူငယ် များ သုံးစွဲရန် ရည်ရွယ်ရေးဆွဲစီစဉ်ပြုလုပ် ထားနိုင်သည်။ ဤကဲ့သို့ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များတွင် သက်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့ကာကွယ်ထားရှိကြောင်းနှင့် အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုချင်းအလိုက် ကျွန်ုပ်တို့၏ လမ်းညွှန်ချက်၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းချက်များကို တိတိကျကျလိုက်နာဆောင်ရွက်မှုရှိစေရန် သေချာစွာ ဆောင်ရွက်ထားရှိပါမည်။
၁၆။ အခြားသော ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများသို့ ချိတ်ဆက်နိုင်မည့် အင်တာနက်လိပ်စာ
၁၆.၁ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင် တတိယကြားခံအဖွဲ့များ၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏ အင်တာနက်လိပ်စာ(links)ပါရှိနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အချို့သော ဒစ်ဂျစ်တယ်ဝန်ဆောင်မှုများသည် တတိယကြားခံအဖွဲ့များ၏ ဝန်ဆောင်မှု များ(လူမှုကွန်ရက် ကဲ့သို့သော)သို့ လူကြီးမင်း ဝင်ရောက်နိုင်ရန် ပေးအပ်ထားရှိပါသည်။
၁၆.၂ တတိယကြားခံအဖွဲ့များ၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများက လူကြီးမင်း၏ သတင်းအချက်အလက်များကို မည်သို့မည်ပုံ ထိန်းသိမ်း ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်သည် ဆိုသည်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျွန်ုပ်တို့တွင် မည်သည့် ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမှ မရှိပါ။ တတိယကြားခံအဖွဲ့များ၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ကျွန်ုပ်တို့က သုံးသပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိသည့်ပြင်၊ ယင်းကဲ့သို့သော တတိယကြားခံအဖွဲ့များ၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်း အချက်အလက်များလုံခြုံမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၎င်းတို့၏ လုပ်ကိုင်ကျင့်သုံး ဆောင်ရွက်မှုများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့တွင် တာဝန်မရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများမှတဆင့် လူကြီးမင်း ဝင်ရောက်ရယူသော မည်သည့်တတိယကြားခံအဖွဲ့များ၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်လုံခြုံမှုဆိုင်ရာ ပေါ်လစီမူဝါဒတို့ကိုမဆို ကျေဇူးပြု၍ သေချာစွာ ဖတ်ရှု့လေ့လာပါ။
၁၇။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များလုံခြုံမှု ဤ မူဝါဒနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ပြုလုပ်ချက်များ
၁၇.၁ ဤပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များလုံခြုံမှု မူဝါဒကို (၂၀၂၀)ခုနှစ် ဇွန်လ (၁)ရက်နေ့တွင် တိုးမြှင့်ပြင်ဆင်မှုများပြုခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များလုံခြုံမှု ဤ မူဝါဒကို အခါအားလျော်စွာ တိုးမြှင့်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်နိုင်ပါသည်၊ ယင်းကဲ့သို့ကိစ္စရပ်များတွင် သိသာထင်ရှားသည့် ကြေညာချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက် မူလပင်မစာမျက်နှာများတွင် ကျွန်ုပ်တို့က ရက်ပေါင်း(၃၀)ကြာ တင်ထားပေးပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို အဆိုပါကာလနောက်ပိုင်းတွင် ဆက်လက်သုံးစွဲခြင်းဖြင့် ဤပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်များလုံခြုံမှုမူဝါဒ (ပြောင်းလဲမှုများအပါအဝင်)ကို ဆက်လက်လက်ခံကြောင်း လူကြီးမင်းက အတည်ပြုခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
၁၇.၂ ကျွန်ုပ်တို့က သင့်တော်သည်ဟု ယူဆသည့်အခါ နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒကို ကြီးမားစွာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုပြုသည့် အခါတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒတွင် တိုးမြှင့်ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲထားကြောင်း/ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအသစ်တို့ ပြုလုပ်ထားပြီးကြောင်း အီးမေးလ် သို့မဟုတ် စာတိုပေးပို့၍ လူကြီးမင်းကို ကျွန်ုပ်တို့က အကြောင်းကြားပါမည်
၁၇.၃ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်လုံခြုံမှုမူဝါဒတွင် ကြီးမားသည့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို ကျွန်ုပ်တို့က ပြုလုပ်ပြီးနောက် အကယ်၍ လူကြီးမင်းအနေဖြင့် ၎င်းတို့ကို လက်ခံလိုခြင်းမရှိလျင် ရပ်စဲမှုပြုသည့်အတွက် အဖိုးအခတစ်စုံတစ်ရာ ကျသင့်ကောက်ခံခြင်းမရှိစေဘဲ ဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်စဲရန် လူကြီးမင်းအနေဖြင့် ရက်ပေါင်း(၃၀) ရရှိပါမည်။ အကယ်၍ လူကြီးမင်းအနေဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုကို ရက်ပေါင်း(၃၀)အတွင်း ရပ်စဲခြင်းမရှိဘဲ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို ဆက်လက်သုံးစွဲခြင်းအားဖြင့် လူကြီးမင်းက ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်လုံခြုံမှုဆိုင်ရာ ဤမူဝါဒကို လူကြီးမင်းက ဆက်လက် အသိမှတ်ပြုလက်ခံကြောင်း သဘောတူညီရာရောက်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့ ကြီးမားသည့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြုလုပ်ခြင်းများကို ကျွန်ုပ်တို့က အီးမေးလ် သို့မဟုတ် စာတို/စာသားပေးပို့၍ လူကြီးမင်းကို ရှင်းလင်းအသိပေး အကြောင်းကြားသွားပါမည်။
၁၈။ ဤ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များလုံခြုံမှုမူဝါဒ နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းများ
၁၈.၁ ဤ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များလုံခြုံမှုမူဝါဒ သို့တည်းမဟုတ် လူကြီးမင်း၏ သတင်း အချက်အလက်တို့ကို ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အကယ်၍ လူကြီးမင်းအနေဖြင့် မေးခွန်း၊ စိုးရိမ်းမကင်းဖြစ်ရမှု သို့မဟုတ် တိုင်းတန်းလိုမှု တစ်စုံတစ်ရာရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များလုံခြုံမှုအရာရှိကို www.telenor.com.mmမှ တဆင့်ဖြစ်စေ care@telenor.com.mm အီးမေးလ်ပေးပို့၍ ဖြစ်စေ Telenor Myanmar call center (dial 979) သို့ ခေါ်ဆို၍ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။